New LG Q92 na Snapdragon 765G na igwe okwu stereo | Gam akporosis
LG Q92, nzọ ọhụrụ nke ndị nrụpụta South Korea na-abịa na nke kacha mma nke Snapdragon 765G
LG amaliteghachila ekwentị ohuru Ihe nhazi Snapdragon 765G maka etiti, nke na-abịa dị ka LG Q92 Na, na mgbakwunye na ịsọ mpi na ekwentị ndị ọzọ niile kwuru na SoC, ọ na-echekwa LG Velvet 5G ama ama, nke ebuputere na May nke afọ a na otu nhazi ahụ.
Ngwaọrụ ọhụrụ ahụ dị iche na Velvet 5G, n'ihe banyere ọdịdị. Otú ọ dị, ọ na-akọrọ ọtụtụ atụmatụ na nkọwa na nke a, ihe enwere ike igosipụta n'okpuru.
1 LG ọhụrụ Q92: ihe niile enwere ịma maka ekwentị a dị n'etiti
LG ọhụrụ Q92: ihe niile enwere ịma maka ekwentị a dị n'etiti
Iji malite, LG Q92 bụ ngwụcha nke na-eweta ihu igwe 6.67-inch na teknụzụ IPS LCD, ihe enwere ike ịhụ dị ka adịghị ike ebe ọ bụ na ọtụtụ ekwentị nwere Snapdragon 765G-ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile-abịa na ngalaba AMOLED ma ọ bụ Super AMOLED, teknụzụ dị elu nke nwere ike ịmịpụta agba ndị ọzọ, mana nke a nwere ike inwe nke a iji belata ọnụahịa ikpeazụ nke ihe nlereanya ahụ ntakịrị, mana nke a na-egbochi ebe ahụ ka ọ bụrụ onye na-agụ akwụkwọ mkpịsị aka agbakwụnyere na ihuenyo ahụ, ọ bụ ya mere ọ ga-eji nọrọ n'akụkụ.
N'aka nke ọzọ, ihuenyo ahụ nwere oghere nke nwere igwefoto selfie nke 32 MP na-akwado ọrụ dịka njirimara ihu na mma oyiyi site na AI. Igwefoto igwefoto nwere ihe mmetụta anọ, ha bụ ndị a: 48 MP main + 8 MP wide angle + 5 MP Eserese eserese + 2 MP macro maka foto dị nso. N'ezie, enwere ọkụ ọkụ LED nke na-ahụ maka ịkọwa mpaghara ndị gbara ọchịchịrị.
Chipset na nke a ka ejikọtara 6 GB Ram na 128 GB n'ime ime ohere Enwere ike ịgbasa ya site na iji kaadi microSD nke ruru 2TB. Batrị na-achọ ime ka ihe niile rụọ ọrụ bụ 4.000 mAh, nke a na-akwụ ụgwọ site na ọdụ USB-C. Anyị na-eche na teknụzụ na-agba ngwa ngwa nke batrị dakọtara dịkarịa ala 18W, mana ụlọ ọrụ ahụ ekpugheghị ihe ọ bụla banyere ya. O doro anya na ọ ga-emecha ma ọ bụ na anyị ga-achọpụta ebe ọzọ.
Isi ihe abụọ na-adọrọ mmasị The sọrọ stereo ọkà okwu na agha-ọkwa-eguzogide nke LG Q92 na-etu ọnụ, otu njirimara nke na-adịkarịghị ahụkarị n'etiti etiti, ọ dịkarịa ala ọ bụghị ọnụ.
Sistemụ arụmọrụ anyị na-ahụ na ekwentị a bụ Android 10 nke LG doziri. Enwekwara nkwado maka 5G SA na netwọk NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi AC, Bluetooth na NFC maka ịkwụ ụgwọ na-enweghị ịkpọtụrụ.
IKIRU 6.67-anụ ọhịa FullHD + IPS LCD na 2.340 X 1.080 pikselụ / 20: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 765G
Gbanwee CAMERA Onye isi 48 MP + 8 MP Wide Angle + 5 MP Portrait Mode + Bokeh maka 2 MP Foto dị nso
CAMERA N'IHU 32 MP
UMUAKA 4.000 mAh ikike
OS Android 10 ahaziri LG
Njikọ Wi-Fi AC / Bluetooth / NFC / GPS / 4G LTE / 5G SA na NSA
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na n'akụkụ aka nri / Ihu ude / USB-C / Stereo ọkà okwu
Mbibi na ibu ibu 166.5 x 77.3 x 8.5 mm na 193 gram
Ekwuputala LG Q92 ohuru site na ụlọ ọrụ dị na South Korea, ụlọ nke ụlọ ọrụ ahụ. N'oge a, enweghị nkọwa gbasara azụmaahịa ya na mpaghara ndị ọzọ, yabụ na ọ gaghị adị na Europe na ụwa ndị ọzọ na mbụ. Agbanyeghị, anyị nwere olile anya na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta ya n'ụwa niile n'oge na-adịghị anya, ihe ga-ekwe omume. Ọ na-abịa na nhọrọ agba atọ, nke na-acha ọbara ọbara, ọcha, na isi awọ
Pricegwọ ya ịgbanwe bụ ihe dịka euro 355, ma nke a ga-abawanye ntakịrị na mba ndị ọzọ. Nke a na ndị ọzọ ka ga-ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG Q92, nzọ ọhụrụ nke ndị nrụpụta South Korea na-abịa na nke kacha mma nke Snapdragon 765G
Galaxy S21 nwere ike itinye S Pen na akara ngosi ga-apụ n'anya ahịa
Họrọ oke bekee kachasị amasị gị na agwaetiti iji gbajie aka ekpe na aka nri